Ny vola dia fitaovana iray hifanakalozana ara-barotra, misy entana na Service amidy na ambongadiny na antsinjarany, dia rehefa mifanaiky amin'ny zavatra vidiana sy ny vidiny ny roa tonta, dia atao ny fifanakalozana.
Mety atao hifanatrehana izany, mety atao alavitra. Ilaina foana izany ny fifampitokisana eo amin'ny mpividy sy ny mpivarotra.
Misy kosa ny garantie apetraky ny lalàna raha efa samy lasa, nefa nisy tsininy ilay entana novidiana na nisy tsy voaloa araka ny tokony nifanarahana ny vola, nefa ny entana na ny service efa livré.
Ao anatin'izay anefa, ny fanjakana dia maka hetra izay tataovana ilay fifanakalozana, entina anaovana fotodrafitrasa ampiasain'ny mpividy sy mpivarotra sy ny mpanjifa ary ny vahoaka rehetra.
Hatreto dia ny TVA izay mitentna 20% amin'ny entana rehetra hifanakalozana no alain'ny mpitaky hetra.
Amintsika miteny izao dia 15% ny fifanakalozana ihany no miditra amin'ny kitapom-bolampanjakana, fa na ny olona tsy mandoa hetra, na ny mpivarotra no manakepoka, na ny mpanao kolikoly no matavy.
Vahaolana goavana entintsika izany, ny fanoloana tanteraka ny vola ho lasa carte électronique.
Hisy karazany telo io carte électronique io:
- Mavo ho an'ny mpanjifa, mpiasa, olon-tsotra monina maharitra eto Madagasikara;
- Maitso ho an'ny mpivarotra, mpandraharaha, mpanao asa tanana, tompon'ny orinasa;
- Mena ho an'ny vahiny mandalo, non résident.
Raha mitovy loko ny karatra mifanakalo dia tsy misy sarany na hetra aloa, fa vao mifanakalo ny mavo sy ny maitso dia voasintona avy hatrany ny hetram-panjakana.
1- Tsy maintsy manana banky ve ny tsirairay?
Tsy voatery hanana banky, fa io carte io no hisolo ny karazana carte rehetra, karapanondro, permis, fifanakalozana ara-bola sy ara-barotra, karatra ara-pahasalamana, fandehanana bus, famarotana omby, pasiporon'omby...
Hisy vary 150kg, rano 15m3, éthanol 30 litres isam-bolana sy isan-tokantrano ihany koa ao anatin'io karatra io.
2- Aiza no hizarana sy akana io carte électronique io?
Isam-pokontany dia hisy fandaminana hakana azy, satria hisy sarin'ilay tompony io carte io ety ivelany, fomba iray koa izany io hananantsika antotanisa marina, sy ny lisitry ny mponina, ary azo sitonina ao ny lisitry ny mpifidy marina. Satria na zazakely vao teraka dia hanana carte électronique avokoa.
Tsy maintsy hisy ny fanentanana lehibe atao amin'izany, hisy ny fitetezana isam-paritra sy isan-tokatrano. Hisy fepotoana rahateo amadihana ny vola hiditra amin'io carte io.
Ady amin'ny kolikoly rahateo io, satria ny volabe any ambany fandriana rehetra any dia tsy maintsy ampidirina ao fa raha dila ny fepotoana dia very ilay vola.
Tsy maintsy hisy izany ireny toerana mpikirakira vola, toy ny banque na micro-cred ireny hiasa anangona ny vola any amintsika ka ampiditra azy anatin'ilay carte électronique.
Arahimaso eo ny mpisoloky izay mety hiseho.
3- Azo antoka ve ny vola, tsy ho very ao anatin'io carte électronique io?
Azo antoka ny vola tsy misy very, ohatrantsika mividy carte crédit téléphone ireny, rehefa kikisanao ilay carte ka ampidirinao anaty findainao ny tarehimarika eo dia mahazo ilay sandan'ny crédit novidianao ianao, rehefa tsy laninao ny fahana, dia mijanona ao hatrany.
Azonao ampiasaina, azonao jerena ny ambiny, azonao zaraina amin'ny olon-kafa, ary mety mahazo bonus akory aza, na zana-bola izy eto, arakarak'ireo tolotra ataon'ny mpikarakara ilay Carte électronique.
Hisy Orin'asa manana fanomezan-dalana manokana izany toy ny Banky, hisahana ny momba azy io. Ka dia samy manana ny tolotra ataony ireo orin'asa ireo.
Ny Foibe kosa no manara-maso sy mametraka ny fetra, toy ny hoe tsy misy vola alaina raha misy fifanakalozana amin'ny carte mitovy, samy mavo, an'ny mpanjifa, na samy maitso an'ny mpandraharaha.
Raha vao misy kosa ny fifanakalozana eo amin'ny karatra mavo sy karatra maitso, dia varotra ny dikan'izay, ka dia misy ny vola alain'ny fanjakana, hetra, ary ny ampahany ho an'ilay mikirakira ny Carte électronique.
Iny dia tsy hitan'ny mpanjifa, fa izay vidin'entana lazain'ny mpivarotra ihany no alaina amin'ilay carte électronique, fa ny hetra dia any amin'ny carte n'ilay mpivarotra no ialany.
4- Ahoana raha very na simba ilay carte électronique, tsy very ve ny vola?
Raha ny vola taratasy, ka latsaka dia ampiasain'olona, ary isika matetika tsy mitondra vola betsaka ampaosy ihalana amin'izay, mametraka vola amin'ny banky mihitsy aza mba tsy hitahiry vola an-trano, ny any ambanivohitra mividy omby ataony banky fitehirizam-bola tsy ho lanilany, sady mba miteraka ny omby, dia miteraka zana-bola.
Ity carte électronique ity, dia misy karazany maro, ao ny carte izay tsy mila code, fa ampadalovina amin'ilay fitaovana amakiana azy, na lecteur fotsiny dia efa mety, alainy ao anatin'ilay carte fotsiny ny maribola hitanao eo amin'ilay lecteur asehon'ny mpivarotra anao. Misy rosia kely hatrany omen'ilay mpivarotra anao, ka raha hafa ny vidin'entana sy ny vola nalaina taminao dia manana porofo ny andaniny sy ankilany tamin'ilay vola naloa.
Raha mipetraka moa ny fifampitokisana arak'ilay resaka tery ambony dia na manome rosia na tsia ny mpivaotra dia mety foana.
Ilaina io ho an'ny olona tsy mahay mamaky teny, mety asehony an'ireo havany mahay mamaky.
Ao kosa ny carte izay mila code 4 chiffres matetika, izay mila tadidiana, ka mila mampiditra io code io ny mpividy vao afaka sitonina ny vola. Misy fetra hatrany ny vola azo alaina, na ho an'ilay carte akasoka fotsiny, na ilay misy code.
Ny antony dia hifehezana hatrany ny mety olon-kafa no ampiasa ilay carte raha sendra very, ka tsy ho betsaka ny vola very.
Azo bloquer na ny carte raha toa ka very, mba tsy ho azon'ny hafa ampiasaina, ka dia soloina vaovao, matetika eo dia ampandoavina vola kosa ny manolo ny carte, toy ireny manao recupération puce sy numéro téléphone very ireny ihany, raha tsy bloqué nao ny numéro nao dia mifaly avanja amin'ny ambin'ny crédit nao ao ilay nahita ilay phone, fa vao bloqué dia tsy azo ampiasaina intsony ilay puce.
5- Ahoana ny karama, aiza no andraisana azy?
Manomboka eo izany dia ny mpampiasa no manao virement na mandefa ny karama amin'ny alalan'ny karatra maitsony mandeha amin'ilay karatra mavon'ny mpiasa, ka avy hatrany eo izany dia alain'ny Fanjakana ilay 1% aloan'ny mpiasa, (3+2)% aloan'ny mpampiasa, 3% no hiantoka ny fahasalaman'ny mpiasa, ary 2% ho an'ny fampiofanana ny mpianatra na ny mpiasa, io ilay ihantoka ny bourse n'ny mpianatra noresahina iny:
Ny fanjakana no mandoa iray manotolo ny karaman'ny Service National miisa 4 000 000:
Ho an'ny privé dia ny mpampiasa no mandefa ny anjarany amin'ilay karatra mavon'ny mpiasa arak'izay nifanarahana tamin'ny fanjakana, ary ny fanjakana kosa no mameno ny ambiny mba hifanahantsahana amin'ny karaman'ny Service National ny an'ny privé.
6- Ahoana ny mpiasan'ny Fokontany sy Kaominina, iza no mandoa ny karamany?
Ny fampiasana ny carte électronique dia anamora ny fikirakiram-bolampanjakana, satria vao misy mividy entana na mandoa hetra eo amin'ny faritra misy azy, dia hitan'ilay réseau lecteur ny toerana misy ilay fifanakalozana, ka avy hatrany dia manao transfert mandritra ny fisitonany ilay hetra ka mivantana amin'ilay compte n'ilay Fokontany, Kaominina, ary Faritra misy ilay fifanakalozana ara-bola na ilay famarotana omby.
Ny fitsinjarana dia tsy miova:
Fonkotany 50% amin'ilay hetra nisitonina;
Nividy voasary 1kg ianao tao Maevatanana:
3 000 ariary ny kilao nifanarahanao sy ny mpividy.
- Ampidiriny amin'ny lecteur ny tarehimarika 3 000 ariary, asehony anao ny soratra;
- Ampidirina amin'ny lecteur ny karatra mavonao;
- Ampidirinao ny code-nao, tsy atao hitan'ilay mpivarotra, ka raha ampy ny volanao ao, dia miala 3 000 ariary ny volanao.
Azo atao ny mampadefa sms amin'ny phone nao hilazana aminao fa nisy nakana 3 000 ariary ny volana, tao Maevatanana, Epicerie Masoandro, ka dia 125 450 ariary sisa ny ambim-bolanao.
Ka raha tsy ianao no nanao ny famindram-bola 3 000 ariary tany Maevatanana, dia efa afaka manao blocage ny carte nao amin'ny alalan'ny finday nao ianao dia manao fitarainana.
Azo asiana asurance daholo ireny hiantoka ny vola very izay voaporofo fa tsy ianao no nanao ny fifanakalozana. Ohatra ianao any Farafangana, voaporofo fa tany aminao ny carte nao, nefa any Maevatanana no misy mamoaka ny volanao.
Io no tena ilana ny cybercriminalité fa tsy ny mpiresaka amin'ny FB.
Amin'io 3 000 ariary io, raha 0,05% ny an'ilay mpikirakira carte, na ilay banque, dia miala 1,5 ariary izany amin'ilay mpivarotra ary 10% ny hetra aloa na ny TVA, dia 300 ariary izany tsinjaraina amin'ny fanjakana arak'ilay fizarana etsy ambony:
Fokontany Ampasimatera 50%: 150 ariary
Kaominina Ampasimatera 25%: 75 ariary
Faritra Avaratra (Mahajanga sy Antsiranana)10% : 30 ariary
Foibe 15%: 45 ariary
Izany hoe miditra hafakaratsaka amin'ilay karatra maitson'ilay mpivarotra izany ny vola (3 000 - 1,5 - 300)= 2 698,5 ariary.
Ary tsy misy hetra hafa aloany intsony hafatsy ny habatsena na ny impôt sur le bénéfice raha société izy.
Ny habatsena aza dia afaka alain'ny Fokotany automatique amin'ilay carte, arak'izay fandaminana misy any.
Hifampivarotra omby kosa ianareo ao Betroka, 1 000 000 ariary no nifanarahina vidin'omby.
Amin'io 1 000 000 ariary io, dia miala ny 0,05% na 500 ariary an'ny mpikirakira karatra na banky, ary raha 10% ny hetra aloa na ny TVA, dia 100 000 ariary izany tsinjaraina amin'ny fanjakana arak'ilay fizarana etsy ambony ihany:
Fokontany Ampasimatera 50%: 50 000 ariary
Kaominina Ampasimatera 25%: 25 000 ariary
Faritra Avaratra (Mahajanga sy Antsiranana)10% : 10 000 ariary
Foibe 15%: 15 000 ariary
Efa misy borne apetraka isaky ny Kaominina, na eny amin'ny Tsenan'omby, na ny phone, misy ny lisitry ny ombinao, dia ataonao transfert amin'ilay karatr'ilay olona mpividy ny ombinao, raha ampy ilay vidin'omby ny compte n'ilay mpividy, dia mifindra amin'ny karatra mavonao, mavo satria mpandraharaha ianao amin'ny maha mpiompy anao, ny vola (1 000 000 - 500 - 100 000)= 899 500 ariary, samy mahazo sms ianareo, ny anao nitombo 899 500 ariary ny solde vola, ary niala iray ny omby nomena ny mpividy, izay hita eo ihany koa ny anarany, tsy anao intsony ny omby mitondra anarana Mazavaloha,
Nahazo message kosa ny mpividy omby fa niala 1 000 000 ariary ny volany, ary nitombo isa 1 ny omby, ka nifidra ao amin'ny lisitry ny ombiny i Mazavaloha, sy ny mombamomba azy rehetra, vakisiny, ny fitsaboana rehetra natao taminy, ny tompony teo aloha, ny sarin'omby...
Ny Fokontany, ny Kaominina, ny Faritra, Foibe izany no samy mandoa ny karaman'ny mpiasany.
Izay no ampiakatra avo 5 heny avy hatrany ilay tetibolam-panjakana 5 000 miliara ariary ankehitriny ho lasa 25 000 miliara ariary avy hatrany ka ny:
* Fokontany (20 000 isa): 50% n'ny tetibola (625 millions ariary isan-taona - 3,125 milliards fmg/fokontany misy olona 1000, 200 tafo)
* Kaominina (1 600 isa): 25% (3,9 miliara ariary - 19,53 milliards fmg isaky ny Kaominina)
* Faritra (3 isa): 10% (833 miliara ariary - 4 166 milliards fmg isaky ny Faritra, Avaratra, Afovoany, Atsimo)
* Foibe: 15% (3 750 miliara Ariary - 18 750 milliards fmg - 1,250 milliards de dollars)
- Ny Fokontany manao ny fotodrafitrasa fototra, miantoka ny fampandehana ny sekoly fanabeazana fototra (maternel - BEPC);
- Ny Kaominina miantoka ny lalana ao anatin'ny kaominina, sy ny fampandehanana ny Lycée, ambaratonga faharoa;
- Ny Faritra miantoka ny fotodrafitrasa lehibe ao anatin'ny faritra, mampandeha ny Oniversité 3 lehibe izay itambaran'ireo vaovao vao ahorina sy ny 6 efa misy amin'izao;
- Ny Foibe no manao ny autoroute, canal de Pangalanes, ny Lalamby manaraka ny morontsiraka atsinanana, ny orinasa mpitrandraka pétrole sy volamena, vato sarobidy, ny port, aéroport...
7- Ahoana ny any ambanivohitra tsy misy jiro, tsy misy reseau téléphone?
Misy ezaka atao amin'ilay fitsinjarana panneau solaire, ka ampidirina amin'io carte électronique io, ny vidin'ny panneau solaire 1 500 000 ariary, isan-tokantrano, ka ny carte n'ny loham-pianakaviana na izay misoratra aminy ihany no hidiran'io. Tsy azo sitonina io vola io, fa ny mpivarotra efa nekena mialoha, misy garantie 10 taona ny panneau amidiny, ihany no afaka misintona an'io. Misy code commerçant izany io.
Alaina isam-bolana amin'ilay carte kosa ny famerenana io vola io, toy ny hoe faktiran-jiro tsy miova isam-bolana 15 000 ariary isam-bolana ao anatin'ny 10 taona. Izany hoe atsasa-bidin'ny vola lany raha labozia 2 isan'andro no ampiasain'ny tokan-trano iray. Ny ny panneau tsy manamainty orona, no azo anaovana charge téléphone, frizidera, radio, télé, jiro...
Ny fournisseur téléphonique dia ao anatin'ny licence omena azy, ny tsy maintsy anaovany fandrakofana na couverture 80% n'ny toerana misy eto Madagasikara, jerena manokana ireo toerana zone enclavée troue noire, latsaka anatin'ny tendrombohitra ireny.
Ny fournisseur téléphonique no haka ny anjarany amin'ilay mpikirakira carte na ilay banky izay mampiasa ny tambazotra-tseratserany na ny réseau.
Fa mitovy amin'ny tsena ihany io, na vola taratasy aza ny anao, rehefa amin'ny toerana tsy misy mpivarotra, dia kaotin'ny vola baoritra anaty paosy ihany ny volanao fa tsy misy ilana azy.
Eto izany, manery ny tsena sy ny mpandraharaha rehetra hiditra amin'ny ara-dalàna avokoa, ka ny Fokontany no anome alalana sy ilay lecteur azy, izay misy hofany kely, amin'ny maha varotra azy, io ilay patente miditra amin'ny Fokontany, Kaominina, Faritra, Foibe arak'ilay fitsinjarana hatrany (50 - 25 - 10 - 15)%.
Ka andraikitry ny Fokontany, raha mpivarotra amoron-dalana tsy misy toeram-pivarotana no mbola omeny lecteur. Manery ny rehetra anaraka ny fandaminana amin'ny tsena izany.
Azon'ny Fokontany tapahana ny lecteur rehefa tsy hay tenenina ilay mpivarotra tsy manara-dalàna.
8- Aiza no akana ilay vary 150Kg, rano 15m3, éthanol 30 litres isam-bolana sy isan-tokatrano, aiza no akana ilay panneau solaire,
Eny amin'ny tsena mahazatra antsika ihany, tsy milahabary akory, izay karazam-bary tiantsika, fa tsy maintsy vary novokarina teto Madagasikara ihany, fa tsy stock na import akory.
Ny mpivaro-bary izany dia efa manana alalana amin'izany, izay alainy amin'ny Fokontany hatrany moa izany eo ampakana ny lecteur, ka raha mpivarotra lamba fripy ianao, dia tsy andeha amin'ny vary ny lecteur nao, fa tsy maintsy ny mpivarotra PPN ihany no afaka misintona ny credit varinao amin'ny karatra mavonao.
Azonao zaraina amin'ny havanao ny crédit varinao, azonao jerana ny ambiny, na solde vary, azonao atakalo amin'izay tianao, na vola na hena, izay hifanarahanareo any.
Ny rano kosa dia sitoninn'y Jirama na izay orin'asa mpaninjara rano amin'ny faktiranao.
Raha mihoatra ny 15m3 ny rano laninao, ohatra 30m3 ny fandaniana nataonao satria ianao misy piscine, manondraka zaridaina, manasa fiara... dia esorina amin'ny credit ranonao ilay 30m3 raha ampy an'izay ao, satria izay tsy laninao tamin'ny volana lasa tsy very akory fa mifanaingina eo hatrany, raha tsy ampy, satria 18 m3 sisa ny solde ranonao, dia izay 18m3 izay no alaina amin'ny crédit ranonao, ary ny 2m3 aloanao amin'ny vola ao anatin'ilay carte électronique mavonao io ihany.
Toy izay koa ny éthanol, haparitaka amin'ny épicerie ny famarotana azy, aparitaka amin'ny station essence, centre commercial...
Ny volan'ny mpivarotra kosa dia ny fanjakana no manome azy, ka mampiditra izany amin'ny karatra maitsony.
Ho an'ireo toerana tsy mbola misy ranon'ny jirama na orin'asa mpaninjara rano, dia soloina vola io crédit rano io.
Hisy ezaka lehibe anefa ny fampidirandrano madio ho an'ny rehetra io (Jereo programa Canal de Pangalanes sy ny programa fambolena)
9- Ahoana ireo vahiny mandalo:
Ny lecteur rehetra na aiza na aiza épicerie na mpandraharaha na orinasa dia afaka mamaky carte Visa na Mastercard avokoa, ka tsy voatery hanana carte électronique malagasy reo vahiny mandalo tsy monina eto amintsika, misy tableau de change kosa efa fantany eny amin'ny banque na hotely hipetrahany, ka ny mpivarotra vao mampiditra ny carte ny dia hilaza aminy ny sandambola hita automatique eo amin'ny lecteur, sy ny vidin'izany amin'ny sandambolan'ilay carte na Euro, na dollar, na Yuan na Roupie...
Afaka maka karatra miloko mena kosa izy eny amin'ny aéroport, na hotely lehibe, na bureau de change, na banque, ka mampiseho ny passeport ny izy, dia ny daty farany hipetrahany eto Madagasikara amin'ny Visa ananany no farafiasan'ilay karatra mena.
Raha misy ambiny ilay vola ao anatin'ny karatrany, dia mitovy amin'ny andavan'andro ihany, na omeny ny guide ny ambim-bola gasiny, na izay olona mahafinaritra azy, na miverina manao change izy, ka soloiny vola vahiny ny ambimbolany dia entiny miverna any aminy.
Na ny vahiny aza dia ho voafehy satria mitovy amin'ny halavan'ny Visa ananany ny fetran'ny karatra mena azony ampiasaina.
Tsy azo ampiasaiana amin'ny fifampivarotana eto amintska ny fivezivezen'ny vola taratasy vahiny, fa na izy mampiasa carte Visa, na izy maka ilay karatra mena manao change.
Amoraina ny fidirana amin'ny ara-dalàna ireo mpanao fandraharahana na bizina vola vahiny eto amintsika.
Izay tratra manao kolikoly amin'ny alalan'ny vola vahiny kosa, na iza na iza, dia sazy hatramin'ny an-terivozina mandrampahafaty no miandry azy.
Mbola miasa kosa ny fifanakalozana mahazatra, Carte bleue, ny chèque ho n'ny orin'asa, ny virement, ny Mvola, Orange Money, ny Airtel Money, sy izay application mobile nahazo alalana.